RASMI: Manchester City oo ku dhawaaqday saxiixa Jack Grealish – Gool FM
Dajiye August 5, 2021
(Manchester) 05 Agoosto 2021. Kooxda Manchester City ayaa ku dhawaaqday inay la soo saxiixatay ciyaaryahanka khadka dhexe naadiga Aston Villa ee Jack Grealish.
Man City ayaa war rasmi ah ay soo saartay waxay ku sheegtay in Grealish uu xiran doono maaliyada kooxdeeda, kaddib markii uu saxiixay qandaraas 6 sano ah.
Jack Grealish ayaa kaddib markii uu saxiixay heshiiska cusub ee kooxda Manchester City, wuxuu ka hadlay dareenkiisa, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiro Manchester City, waa kooxda ugu fiican England, iyadoo heysata tababare loo arko inuu yahay kan ugu fiican adduunka, waa riyo ii rumowday, inaan ka mid noqdo kooxdan.”
“Manchester waxay ku guuleysatay koobab waaweyn 10 -kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, Pep Guardiola wuxuu gaarsiiyay heerka xiga, kubadda ay kooxdu ciyaareyso ayaa ah tan ugu xiisaha badan Yurub.”
“Inaan u ciyaaro Guardiola oo aan wax ka barto waxay noqon doontaa wax gaar ah, taasina waa wax ciyaaryahan kasta oo weyn uu doonayo.”
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in heshiiska Jack Grealish uu ku kacay ku dhawaad 100 million pounds, oo ah heshiisyadii ugu qaalisanaa ee Premier League -ga taariikhda, isagoo ka sarreeya Paul Pogba, oo Manchester United ugu biiray 89 million pounds.
Wakiilka Lukaku oo diray fariin dahsoon oo ku saabsabsan mustaqbalkiisa Inter xilli ay Chelsea xiiseyneyso